Mna rhoqo kuva ukuba abafazi kuba iingxaki umntu kufuneka athimba. Ingakumbi, ukuba awuqinisekanga mhlawumbi kancinci ukuba neentloni okanye hayi enyanisweni extroverted personality kwi-Prince wakhe amaphupha. Ukuba kufuneka ifunyenwe umntu ukuba nezibheno kuwe ezininzi, ngoko uyakwazi zama arouse yakhe ingqalelo. Ngaba ukufikelela kuma baphume indimbane.
a mnandi dress okanye mnandi izinto ezongezelelwayo unako ukutsala i-ingqalelo emntwini ofuna athimba. Ukuba ufuna ziyahluka kolu bubonke i abafazi, ngoko ke uya ndiyawazi nkqu subtle. Kunjalo kufuneka ingabi overdo nge yakho Outfit. Embalwa kakuhle-ibekwe iliso-catcher njengokuba beautiful kodwa subtle Makeup okanye elikhulu necklace unako rhoqo kwanela rouse yakhe ingqalelo. Ngena kwi – ‘budlelwane-Kwincwadana kwaye uya kufumana Ibhonasi instantly yi-E-ukuphumelela i-Imeyili free iincam ukuba kuba intliziyo umntu, kwaye ukubeka isiseko kuba ngempumelelo elide budlelwane. Ukongeza, uza yithi rhoqo kufumana exclusive iincam nge e-Mail ku-a ngempumelelo budlelwane. Ngokunqakraza iqhosha ‘zibophelele Ngoku’ uyavuma ukuba iwebhusayithi ithumela yithi rhoqo ulwazi isihloko se budlelwane nabanye nge-E-Mail. Uyakwazi rhoxa nangaliphi na ixesha ukususela kweli phephandaba lamalungu. Zama, umzekelo, kwi-d-shop ilungelo Mzuzu kuba wambona. Ukuya Kuye, xa oko ikhangeleka nje ngoko ke akuba asixakekanga, okanye abancinane ukwenza. Hectic kwiimeko umele ukuphephe. Ukuba umngcipheko ukuba crucial ulwazi ayikho apha zithe communicated, kwaye ufumana Ithuba nokuchithakalela. Ukuba ayinjalo ngenye indlela kunokwenzeka, ezifana, umzekelo, emva concert, kwaye malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ukuba uza zange kumbona kwakhona, yiya kuye kwaye uthethe kuye nakanjani na. Akukho nto ngakumbi annoying kwe-xa uthi ukuba ngokwakho kamva:”ndinqwenela kukhankanywe ngayo, ndiyabona ke ngoku, kuzo zonke isenzo sempumelelo, zange kwakhona”. Amadoda nabafazi kufuneka imizuzwana ukuze ukwazi ingaba i-uluvo lwakhe malunga interlocutor. Kunye zethu facial muscles, sinako. ezahluka-hlukileyo yenza ingxenye yesakhelo, nemvakalelo kwaye moods ukuba ukuthutha. Kubalulekile ukunika crucial yintoni yakho impression, ukuba ufuna athimba umntu. Nangona kunjalo, i-artificial kwaye unnatural ukuziphatha ngu kukhankanyiwe yi-phantsi, umzekelo, supposedly ngendlela engalunganga isimo, baqonde uninzi abantu ngokukhawuleza, kwaye rhoqo ikhangeleka unnatural, kwaye hayi kakhulu likeable. Nina bahlala ngokulula yendalo, kwaye baya kuza kunye kulungile-groomed imbonakalo. Visual stimuli ingaba kuba uninzi abantu, kuqala impression kakhulu crucial. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga nayo, ndinako finesse”umfazi: Uza recommend abantu Whisperer”. Encwadini ‘Kuqala Umhla: Ngokugqibeleleyo elungiselelwe yakho Intlanganiso yokuqala uzakufumana ezininzi iincam kwaye Trick kufuneka ukumbule ngomhla wokuqala Umhla. Ndiza kukubonisa yintoni kuthatha phambi Umhla, emva Umhla kwaye kulo Mhla. Ukunceda kuni lohlobo umqali ke iimpazamo ukuphepha. Ukuba ufaka ngendlela elungileyo isimo, wena ncuma. A yendalo, eyobuhlobo Ncuma kunye apho umntu sympathy ngu wacebisa, kubonakala ngathi kakhulu nabafana. Page uyakwazi ukuqokelela lokuqala impression ezininzi kakhulu dibanisa amanqaku. I-decisive ifekta ingaba naturalness ngu apha. Ukuba ufuna musa bazive ngathi i-honest kwaye enyanisekileyo Ncuma, ngoko ke kufuneka ibonakale ngcono. Ngenxa yokuba akukho nto unlikable njengoko i-artificial Ncuma. Ukuba ufaka ke naye kwi-a Incoko ukuba abe obandakanyekayo, mamela kuye ngenyameko. Ngoko ke ungaqala kamva kwakhona omtsha incoko, kwaye sele lixoxiwe isihloko se revisiting. Ukuba abe sele kukhankanywe, umzekelo, i-injury ngomhla knee okanye Iqela ngempelaveki, uyakwazi buza kuye Kwintlanganiso elandelayo ngokulula, njani ukuba yenze ngenxa yakhe knee kwaye kwaba ngelixa omnye Umntu. Ngoko ke kufuneka elungileyo ndawo ukuqala, ukuze bathethe kuye kwincoko apho onomdla kuye, kakhulu. Amaxesha ngamaxesha encinane compliment unako kukunika abanye dibanisa amanqaku.
Nje musa overdo kuyo
Ezininzi, okanye mhlawumbi nkqu ubuxoki izincomo jonga unnatural kwaye ngenye daunting. Ukuba ufuna ukwenza kwakhe a compliment, ngoko ke kufuneka zisoloko honest. Ngaba umzekelo-icatshulwe, umzekelo, into ukuze abe hayi kuba nkqu kuvakala kaninzi. Ukuba wone strikingly beautiful amehlo, ke wena umxelele ukuba ukho kakhulu funny kwaye elikhulu uluvo Humor. Kunye enjalo Kodwa izinto unako misela kuwe ngaphandle subconsciously. Kwaye akunyanzelekanga ukuba zithetha yakho iinwele. Ukuba ufuna athimba umntu, kufuneka baqaphele ukuba ufuna Naye kwi iliza ubude. Imibuzo omnye uthi kanjalo ukuba chemistry kufuneka ekunene. I-chemistry silapha kodwa kuphela ukuba sele kwezinye kwiindawo Similarities. Uzama ukufumana ezenzeka emhlabeni. Ukuba lowo drives, umzekelo, kakhulu na motorcycle, ngoko ke ungakwazi umzekelo-icatshulwe ukuba uphelelwe sele riding a bike kwaye wenza kwabo ezininzi uvuyo. Ukuba uyakwazi ukufumana ezininzi similarities ukuba oluzenzekelayo sympathy kwaye trust. Zama, ke ngoko, ngo ecela ethile imibuzo yokufumana phandle ukuba yeyiphi umdla yena sele. Ngaphezulu kule wam incwadi,”ukwakha trust uze uphumelele ibhaso kwakhona – isikhokelo kuba ekuzalisekiseni budlelwane”. Abantu, ezininzi zibalisa bazive ngokuzenzekelayo kwi wawuphungula. Oku oninika i-ezongezelelweyo dibanisa sesishumi. Enye indlela jikelele, ukuba ungakwazi sixelele lonke ixesha, uyazi nto malunga naye. Nceda qiniseka ukuba ulwalamano ichanekile kwaye ukuba ufuna ngaphezulu okanye ngaphantsi ngo no proportions ukusuka umxelele. Ukuba uyayazi kancinci ixesha elide kwaye mhlawumbi nkqu ngamanye amaxesha thetha ngamnye enye, uyakwazi phembelela kanjalo, kulula ukuba abe ngobukho bakhe imagination nantoni na ukuba lo mntu ukuba athimba. Ukuba ufaka ekhaya, uyakwazi bambiza ngokuba xa ufuna kwi-ibhafu kwaye ndimchazele malunga nayo. Uninzi abantu fumana kakhulu arousing. Kukangakanani ndiya kuva abafazi, amazwi”ingaba”. Abaninzi bacinga kwaye umthetho kakhulu kakhulu kwi-subjunctive. Ngendlela ethile kwiimeko, kufuneka yiya kwi Ulwim, ukuba abe nako ukwenza phupha indoda athimba ngokwakhe kancinci kuba comment uncedo. Ukuba ufaka honest ukuba ngokwakho, kufuneka kuphulukana nayo kodwa ngaba ngokwenene nto. Kwi-eyona imbi kunjalo, ufumana u’a rebuff. Kwi-eyona kunjalo, uthetha yakho kwixesha elizayo umyeni. Yintoni igama ke ngoko ke, ozolisayo: animelanga ukuba banike impression ukuba baya kuhamba emva kwakhe. I ukusebenza ngomhla abantu ngenye daunting. Kwesinye isandla, kufuneka ingabi kuye ngokupheleleyo, ukuqinisekisa kukhuselwa inkululeko zabo. Ukuba wabhala nani umyalezo kwaye ufuna ngokwenene ngenene ujonge phambili yakhe elandelayo omnye, hlala zolile kwaye ubhale kuwe kwaye kulula ukutshintsha kamva. Uninzi abantu bacinga ngokufanayo kwaye ungathanda ukuba ubhala umva. Ukuba ufuna musa ukubhala emva kuye ngoko nangoko, qinisa ke kancinci kwi-torture, kwaye uya ndonwabe ke bonke vetshe malunga umyalezo wakho. Kanjalo apha kufuneka ingabi overdo kuyo. Ukuba ufuna musa ukubhala emva kuye kuba kwiiveki, lowo ayikwazi e abanye incopho alahlekelwe inzala. Amaxesha ngamaxesha, into, ayizange kwenzakalisa umntu. Okubaluleke kakhulu ukuba ufuna athimba indoda: Hlala, kunjalo. Amaxesha amaninzi, ngaphantsi kubaluleke ngakumbi, njengoko kwi-classic Bauhaus uhlobo. Oku kuyinyaniso ingakumbi abasetyhini, wambetha kunye zabo imbonakalo amaxesha ngamaxesha phezu strands. Ngaba overdo nge yakho Makeup, perfume kunye ne jonga. Ngexesha imihla emva baba nokuqubha kunye okokuqala i-façade ubani noticeable, nakanjani na. Kufuneka nje uhlale ngokwakho, ngoko ke kufuneka kakhulu chances ukuthatha ilungelo umntu. IIND: ufuna umntu kwaye personal ingcebiso. Ngoku, ndiza umnikelo limited slots ngenxa yam budlelwane iingcebiso nge-E-Mail. Mna andikwazi kukunceda, ukuba ngaba kwenzeka isihloko se budlelwane kwaye kufuneka ka-uncedo. Yinto enye eyona iinketho ukuba ufuna ngqo uncedo kwaye andazi. Lwakho lobuqu impendulo, idla zingaphelanga iiyure. Ngolwazi oluthe vetshe unga fumana apha. Uvumelekile ukuba unhappy kwi-budlelwane. Ufuna ukwazi njani ukwakha ukususela ekuqalekeni a budlelwane. Ngoku ungafumana le ngenkxaso incwadi phezu amaphepha ezininzi exabisekileyo iincam ukuba Kufuneka kwixesha elizayo kuya kusinceda. Waqala umntu esebenzayo kwi-budlelwane ukufumana ukwazi ukuba ngokusisigxina ukugcina. Ukongeza, ndiya zichaza kangakanani ukumelana budlelwane iingxaki. Ingakumbi surprised mna icandelo ndinguye: yiya kwi Ulwim. Ngoko ke lotshintsho ndinqwenela acted kwi-zange. Kufuneka ube Ibhunga kwesi sihloko ka-budlelwane. Thuma mna isicelo sakho qaphela: Zethu iingxelo ingaba ibhalwe ngu ezahlukeneyo ababhali ukuba enze zabo assessment nganye kwaye zahlukeneyo okujoliswe kuko iqela. Ke ngoko, kuya sinokukhokelela ezahlukeneyo iziphumo Iingxelo kwi-us-mahlanu portals. Ngena kwi – ‘budlelwane-Kwincwadana kwaye uya kufumana Ibhonasi instantly yi-E-ukuphumelela i-Imeyili free iincam ukuba kuba intliziyo umntu, kwaye ukubeka isiseko kuba ngempumelelo elide budlelwane. Ukongeza, uza yithi rhoqo kufumana exclusive iincam nge e-Mail ku-a ngempumelelo budlelwane yokwakha. Ngokunqakraza iqhosha ‘zibophelele Ngoku’ uyavuma ukuba iwebhusayithi ithumela yithi rhoqo ulwazi isihloko se budlelwane nabanye nge-E-Mail
← Dating ngaphandle ubhaliso-intanethi
Dating incoko roulette →